Why do we buy expensive iPhone? • TECH CORNER
Why do we buy expensive iPhone?
Post Views: 33,919
ကြှနျတျောတို့ဟာ iPhone တှကေို ဘာကွောငျ့ စြေးကွီးပေးဝယျကွတာလဲ?
ဒီနဆေ့ောငျးပါးလေးမှာတော့ Apple ကိုခဈြတဲ့သူတဈယောကျအနနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ဟာ iPhone တဈလုံးကို ဘယျလိုအခကျြတှကွေောငျ့ စြေးကွီးပေးဝယျကွတာလဲ ဆိုတာကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ယခုဆောငျးပါးဟာ Apple ကို ခဈြတဲ့စိတျနဲ့သာ ရေးထားခွငျး ဖွဈပွီး အခွား Android Phone တှကေို အမွငျမကွညျလငျခွငျး အလဉျြးမရှိပါ။
နောကျထပျဆောငျးပါးတဈခုမှာ Android Phone တဈလုံးကို ဘာကွောငျ့ iPhone အစားဝယျသူသငျ့တာလဲဆိုတဲ့ အခကျြတှကေို users တှဘေကျက တှေးသငျ့တဲ့ အတှေးမြိုးနဲ့ ဆကျလကျဖျောပွပေးပါမယျ။
ကဲ … အခုတော့ iPhone တဈလုံးဟာ ပေးရတဲ့ စြေးနဲ့တနျရဲ့လားဆိုတာကို ကွညျ့လိုကျရအောငျဗြာ။
Photo from Mobile Syrup
1.Because Apple is Apple
ဟုတျပါတယျ ကြှနျတျောတို့ Apple ခဈြသူတှဟော Apple ကိုခဈြလို့ကို iPhone အသဈတှစြေေးကွီးပေးပွီး ဝယျယူကွတာပါ။ xD
2.GUI (Graphical User Interface)
iOS ရဲ့ UI ဟာ ကနျ့သတျမှူမြားစှာနဲ့ customize လုပျဖို့ မလှယျကူလှပါဘူး။ iOS 8 ကတညျးက အခု iOS 13 အထိ iPhone တှရေဲ့ UI ဟာ ထူးထူးခွားခွား မပွောငျးလဲခဲ့တာ ကွာပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ ‘Simplicity is the BEST’ အရိုးရှငျးဆုံးဟာ အလှဆုံးပါပဲ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ Android မှာ Custom UI အစုံတငျပွီးတော့ရော iOS ကိုရော နှဈရှညျလမြား အသုံးပွုခဲ့ဖူးပါတယျ။ ကွာလာတော့ Android ပျေါမှာ Customize လုပျရတာ ကြှနျတေျာ့အတှကျ အတေျာ့ကို ပငျြးရိလာတယျလို့ ခံစားလာရတယျ။
iOS ကို jailbreak လုပျပွီး Themes တှပွေောငျးတယျ မြိုးစုံအလှဆငျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြားဆုံးတဈပတျပဲ ခံတယျ ပွီးတာနဲ့ iOS ရဲ့ Default UI ကိုပဲ ပွနျပွနျ ပွောငျးဖွဈတယျ။ ကြှနျတေျာ့အတှကျ iOS ရဲ့ default UI ဟာ မကျြလုံးထဲမှာ အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အလှဆုံးလို့တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ခံစားလာရတယျ။ Home screen က Apps တှကေို သူ့ Original အတိုငျးထားထားတာဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ အလှဆုံးနဲ့ မရိုးနိုငျဆုံး မွငျကှငျးပါပဲ။
သငျတို့ရော iOS ရဲ့ User interface ကို ဘယျလိုထငျပါသလဲ?
3.The Operating System (iOS)
ဘယျသူတှေ ဘယျလိုပဲ ပွောပွော Operating system တှအေားလုံးထဲမှာ iOS ဟာ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ အရိုးရှငျးဆုံးနဲ့ အဆနျးပွားဆုံး ဖွဈပါတယျ။ ဘယျ OS မှာမှ မရတဲ့ OS တဈခုရဲ့ ခြောမှမှေူ့ကို ခံစားရတယျ။ Crash ဖွဈတာလဲ အနညျးဆုံး OS တဈခုဖွဈပါတယျ။ သာမနျ အသုံးပွုသူတဈယောကျအတှကျ iOS ဟာ Easy to use ပါပဲ အသုံးပွုရအရမျးလှယျကူတယျ။ Android ဖုနျးတှမှောလို UI တှေ ကှာခွားမှူမရှိတာကွောငျ့ iOS ကို တဈခါအသုံးပွုဖူးထားတယျဆိုရငျ ဘယျလို iDevices ကိုမဆို လှယျလှယျကူကူ အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Clean and Minimalist ဆိုတာကို ခုံမငျတဲ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျတော့ iOS နဲ့ အကိုကျညီဆုံးပါပဲ။ iOS ရဲ့ အားသာခကျြတှကေို ပွောနရေငျ ရှညျမှာစိုးတာကွောငျ့ iOS versus Android ဆိုတဲ့ Post လေးမှာ iOS ရဲ့ အနိုငျရတဲ့ အားသာခကျြတှကေို ဖတျကွညျ့နိုငျပါတယျ။
iPhone တှမှော အသုံးပွုတဲ့ Hardware တှဟော Apple ကိုယျတိုငျ Design ဆှဲပွီး သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျနညျးပညာနဲ့ အခွား company တှကေို ထုတျလုပျခိုငျးတာဖွဈပါတယျ။ iOS နဲ့ iPhone တှေ တဈသှေးတညျး ၊ တဈသားတညျးကနြတောဟာ Apple ရဲ့ အကောငျးဆုံးသော Hardware တှကွေောငျ့ဆိုတာ ငွငျးမရတဲ့ အမှနျတရားပါ။ A series CPU တှကေို Apple ရဲ့ ကိုယျပိုငျနညျးပညာနဲ့ TSMC, Samsung စတဲ့ company တှကေ ထုတျလုပျပေးတာဖွဈပွီး အခွား Brand တှလေို CPU တှကေို Qualcomm တို့ Mediatek တို့ဆီက ဝယျယူရတာမဟုတျပါဘူး။
သငျ့အနနေဲ့ Apple ဟာ အခွား company တှဆေီက အရေးကွီးတဲ့ Hardware တှကေို ဒီတိုငျး ဝယျယူနရေတယျထငျရငျ မှားသှားပါလိမျ့မယျ။ အဲ့လိုဝယျလို့ရတိုငျးသာဆိုရငျ Apple ရဲ့ A series chips တှေ ၊ True tone display လို နညျးပညာတှေ ၊ 3D touch လို နညျးပညာတှကေို အဲ့ hardware ထုတျပေးတဲ့ ကုမ်မဏီတှကေ သုံးနမှောပေါ့။ ဒီ Company တှကေ Apple ရဲ့ Design အတိုငျး ၊ နညျးပညာအတိုငျးပဲ လုပျပေးရတာဖွဈပါတယျ။ သူတို့အနနေဲ့လဲ ဒီနညျးပညာတှကေို ကူးခလြို့မရအောငျ Apple က မူပိုငျခှငျ့တှနေဲ့ တားမွဈထားပါတယျ။
Apple အနနေဲ့လဲ ဖုနျးတဈလုံးရဲ့ parts တှအေကုနျကို ထုတျလုပျဖို့ စကျရုံမရှိတာကွောငျ့ အခုလို ဝယျယူအသုံးပွုရတာဖွဈပါတယျ။
ဒါပသေိ အခုခြိနျမှာတော့ Apple ဟာ Qualcomm နဲ့ ပွသနာတကျထားပွီး 5G modem တှကေို မထုတျလုပျနိုငျသေးလို့ 2019 iPhone တှမှော 5G မရပါဘူး။ xD
ဒါပမေဲ့ 5G modem တှကေို အခု Apple က ကိုယျပိုငျစကျရုံနဲ့ စတငျထုတျလုပျတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
Photo from 9to5Mac
iPhone နဲ့တှဲဖကျအသုံးပွုလို့ရတဲ့ Accessories တှဟော Android flagship တှထေကျပိုမိုမြားပွားပါတယျ။ Screen guard, cover ကအစ Premium accessories တှအေဆုံး အစုံအလငျရှိပါတယျ။
Camera Lens Kits တှေ ၊ Keyboard တှေ ၊ Bluetooth နဲ့ တှဲဖကျကစားရတဲ့ Sphere Mini Robot လို ကစားစရာလေးတှေ ၊ iOS health app နဲ့ တှဲဖကျအသုံးပွုနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေး အထောကျအကူပွု ပစ်စညျးတှေ စသညျဖွငျ့ စုံလငျလှပါတယျ။ Accessories makers တှအေနနေဲ့လဲ တဈနှဈမှ တဈခုပဲ ထှကျတဲ့ iPhone တှအေတှကျ ပွုလုပျရတာ ပိုမိုလှယျကူပွီး မြားပွားလှတဲ့ android flagship တှအေတှကျကတြော့ ထုတျလုပျရမဲ့ range က ကယျြဝနျးလှတာကွောငျ့ iPhone တှအေတှကျ တကယျအသုံးဝငျတဲ့ Accessories တှဟော ပေါမြားလှပါတယျ။
Apple ရဲ့ Ecosystmy အကွောငျးကို အောကျက Chart လေးကိုကွညျ့လိုကျရငျ နားလညျလောကျမယျထငျပါတယျ။
Photo fromaQuora user
More Apple Services – Apple Arcade, Apple pay, Apple TV, Apple News+, Apple Card etc
Hardware, Software, Application Software, and Services ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျလေးခု အောကျမှာ Apple Ecosystem ဟာ သိပျကို ပွညျ့စုံတယျလို့ပွောလို့ရပါတယျ။ အခွား Ecosystem တှထေကျ ပိုပွီး Secure and Reliable ဖွဈတယျဆိုတာလဲ ငွငျးမရတဲ့ အမှနျတရားပါ။
7.Best Support and Help
iPhone တဈလုံးရဲ့ Warranty ဟာဘယျလောကျထိ Reliable ဖွဈတယျဆိုတာတော့ သငျ သိလောကျမယျထငျပါတယျ။ Apple ရဲ့ warranty အကွောငျးအသေးစိတျသိခငျြရငျ ကို Pyae Hein Kyaw ရဲ့ PHK Knowledge sharing website မှာ သှားရောကျဖတျရှူနိုငျပါတယျ။ Here is the link
Best Support ဆိုတဲ့ နရောမှာ Apple Support နဲ့ live chat ဖူးတဲ့သူဆိုရငျ Apple ရဲ့ Support ဟာ ဘယျလောကျထိ အဆငျပွတေယျဆိုတာ သိပါလိမျ့မယျ။ Apple support team မှာ သငျ့ရဲ့ Apple Products တှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ကူညီပေးမဲ့ 24/7 live chat ပွုလုပျပေးမဲ့ ဝနျထမျးတှေ အမွဲအဆငျသငျ့ရှိပါတယျ။
Apple ရဲ့ After-Sale Service ဟာလဲ အတေျာ့ကို ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ Service တဈခုဖွဈပါတယျ။ Customer ကို ဝယျယူပွီးတဲ့နောကျ ဖွဈခဈြတာဖွဈဆိုပွီး ပဈထားတဲ့အထဲမှာ Apple မပါပါဘူး။
Customer ကို ပဈထားတာမြိုး Apple မလုပျ ၊ လုပျရငျ Apple မဟုတျ xD
Hardware ပိုငျးနဲ့ ပတျသကျလို့ Return Policy တှေ ၊ Repair Program (ပွနျလညျပွငျဆငျပေးတာ)တှေ ၊ Replacement Program ( အသဈလဲလှယျပေးတာ ) တှေ စတာမြိုးတှကေို အမွဲလိုလိုပွုလုပျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ – Battery ကနြတေဲ့ iPhone တှကေို $ အနညျးငယျနဲ့ အသဈလဲပေးတာ ၊ Macbook တှရေဲ့ Keyboards တှေ လဲပေးတာ ၊ ဟိုတလောကပဲ ထှကျရှိပွီးတာ နှဈခြီနတေဲ့ iPhone 6s လိုဖုနျးမြိုးကိုတောငျ အဖကျလုပျပွီး Repair Program ပွုလုပျပေးလိုကျပါသေးတယျ။ iPhone 6s Repair Program Link
More Details about Apple Repair Program
Software ပိုငျးနဲ့ ပတျသကျလို့လဲ Security Flaw, software bugs, errors ဘယျလိုမြိုးပဲ ဖွဈဖွဈ နခေ့ငျြးညခငျြး update အသဈထုတျပေးပါတယျ။ ဒီလို Software Support မြိုးကို android တှမှော Pixel, One Plus နဲ့ Android One တှလေောကျကလှဲလို့ ဘယျ brand မှ မလုပျပေးပါဘူး။ Software update နဲ့ ပတျသကျလို့လဲ ထှကျရှိပွီးတာ ၄ နှဈကွာနတေဲ့ iPhone 6s တောငျ 2019 ရဲ့ iOS 13 ကို အသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ အခွား Android တှမှော Software Update ဆိုတာကို ရဖို့ iOS လောကျမလှယျကူတာတော့ အမှနျပါ။
9.Long Term Usage
Support တှေ ၊ aftersale Service တှအေကွောငျး ပွောပွီးပွီဆိုတော့ Long term usage အကွောငျးပွောရအောငျ
ဘယျသူမှ ဒီနခေ့တျေမှာ Phone တဈလုံးကို ၄/၅ နှဈမသုံးပါဘူး။ သုံးခငျြရငျလဲ iPhone တှနေဲ့ အလိုကျဖကျဆုံးပါပဲ။ 2015 က iPhone 6s လေးဟာ ဒီနေ့ 2019 မှာ iOS 13 နဲ့ သာသာယာယာ အသုံးပွုလို့ရနပေါသေးတယျ။ 2015 တုနျးက ကြှနျတေျာ့ရဲ့ Android flagship လေးတဈလုံးကတော့ Android 7.0 နဲ့ အတိတျမှာ ကနျြရဈနခေဲ့ရပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ဘျောဒါတဈယောကျဟာ 2014 က iPhone6ကို အခု 2019 ရောကျမှ iPhone အသဈတဈလုံးနဲ့ လဲပါတယျ။ Android flagship တဈလုံးဝယျဖို့ ဘယျလိုမှ တိုကျတှနျးမရပဲ iPhone ပဲဝယျပါတယျ။ ဘာလို့ဆို ဒီကောငျက ဖုနျးတဈလုံးကို ၅ နှဈစီမံကိနျးနဲ့ ကိုငျတဲ့ကောငျမလို့ပါ။ ဆိုတော့ ကွာကွာသုံးမဲ့ သူတှအေတှကျ iPhone တှကေ Software support & aftersale service ကောငျးကောငျးနဲ့ အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။
iPhone 6s from apple
ဒီအခကျြဟာ လူတျောတျောမြားမြား iPhone တှကေို ဝယျယူတဲ့အခကျြဆိုရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ :3
Apple အနနေဲ့ သူ့ရဲ့ Brand Image ကိုဘယျလောကျယုံကွညျလဲဆိုရငျ $999 တနျ Mac stand ထုတျရောငျးတာသာ ကွညျ့တော့ xD
တကယျပါ သာမနျလူတဈယောကျကို Android Flagship ဖုနျးတဈလုံးနဲ့ Latest iPhone တဈလုံး နှဈခုယှဉျခပြေးရငျ ၁၀၀ မှာ ၉၀ က iPhone ကို ရှေးမှာ အသအေခြာပါပဲ။ သငျ့အနနေဲ့ iPhone နဲ့ မှနျရှမှေ့ာ Mirror Selfie ရိုကျဖူးတဲ့ သူတဈယောကျဆိုရငျ Apple ရဲ့ Brand Image ဘယျလောကျရှိတယျဆိုတာ သိပါလိမျ့မယျ။ xD
Photo from Monday Note
Tech နဲ့ မရငျးနှီးတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ iPhone တှဟော အကောငျးဆုံး ဆိုတဲ့ Concept လေးတှတေောငျ ရှိနတေတျကွပါတယျ။
နောကျဆုံးပျေါ iPhone တဈလုံးကို ကိုငျထားရတဲ့ Premium ဖွဈမှူဆိုတာကိုလဲ နောကျဆုံးပျေါ iPhone မကိုငျဖူးတဲ့သူတှအေတှကျတော့ နညျးနညျး လကျမခံခငျြစရာတော့ရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကွီးကယျြတဲ့ ပှဲတဈခု အခမျးအနားတဈခု တကျတာမြိုးမှာ နောကျဆုံးပျေါ iPhone တဈလုံးကိုငျသှားရငျ Apple ရဲ့ Brand Image ကို သငျသိလာပါလိမျ့မယျ။ လူတှဟော iPhone တဈလုံးကို သာမနျ Smartphone တဈလုံးထကျ Luxury Brand တဈခုလိုမြိုး ပိုပွီးတောငျ အသုံးခတြတျကွပါသေးတယျ။
iPhone Series တှဟော တဈနှဈမှာ တဈခါသာထှကျလရှေိ့ပါတယျ။ ဟိုးအရငျတညျးက Apple ဟာ Consistency ကောငျးကောငျးနဲ့ iPhone series တှကေို ထုတျလုပျလာခဲ့တာ 11 နှဈ iPhone 11 အထိတိုငျခဲ့ပါပွီ။ တဈနှဈကို series 10 မြိုးလောကျအထိ ထုတျနတေဲ့ Brand တှနေဲ့ စာရငျ Apple ရဲ့ ဒီလို Consistency ကောငျးမှူတှကွေောငျ့လဲ Brand Image ဟာ ဒီလောကျထိ ကွီးကယျြသှားတာဖွဈပါတယျ။
12.Because Apple is Apple, iPhone is iPhone
ဟုတျပါတယျ။ နောကျဆုံးအခကျြကလဲ iPhone တှဟော Apple ရဲ့ Masterpiece လကျရာတှဖွေဈတာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့တှဟော iPhone အသဈတှကေို စြေးကွီးပေးပွီး ဝယျယူကွတာဖွဈပါတယျ။
Because Apple is Apple ပါ xD
Photo from Speeli
ယခုရေးသားဖျောပွခဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးလေးဟာ Apple fan တဈယောကျအနနေဲ့ ရေးသားထားခွငျးဖွဈပွီး အခွား Android Phone တှကေို အမွငျမကွညျလငျခွငျး အလဉျြးမရှိကွောငျး ထပျမံပွောပါရစေ။
Admin ကိုယျတိုငျလဲ iOS နဲ့ android နှဈခုလုံး အသုံးပွုတာဖွဈတဲ့အတှကျ နောကျတဈပတျမှာ android ဖုနျးတဈလုံးကို iPhone တဈလုံးအစား ရှေးခယျြသငျ့တဲ့ အခကျြတှကေို users တဈယောကျရဲ့ Point of view ကနေ ရေးသားဖျောပွသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ iPhone တွေကို ဘာကြောင့် ဈေးကြီးပေးဝယ်ကြတာလဲ?
ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ Apple ကိုချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ iPhone တစ်လုံးကို ဘယ်လိုအချက်တွေကြောင့် ဈေးကြီးပေးဝယ်ကြတာလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယခုဆောင်းပါးဟာ Apple ကို ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သာ ရေးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အခြား Android Phone တွေကို အမြင်မကြည်လင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိပါ။
နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ခုမှာ Android Phone တစ်လုံးကို ဘာကြောင့် iPhone အစားဝယ်သူသင့်တာလဲဆိုတဲ့ အချက်တွေကို users တွေဘက်က တွေးသင့်တဲ့ အတွေးမျိုးနဲ့ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်။
ကဲ … အခုတော့ iPhone တစ်လုံးဟာ ပေးရတဲ့ ဈေးနဲ့တန်ရဲ့လားဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ Apple ချစ်သူတွေဟာ Apple ကိုချစ်လို့ကို iPhone အသစ်တွေဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ယူကြတာပါ။ xD
iOS ရဲ့ UI ဟာ ကန့်သတ်မှူများစွာနဲ့ customize လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ iOS 8 ကတည်းက အခု iOS 13 အထိ iPhone တွေရဲ့ UI ဟာ ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ ‘Simplicity is the BEST’ အရိုးရှင်းဆုံးဟာ အလှဆုံးပါပဲ။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Android မှာ Custom UI အစုံတင်ပြီးတော့ရော iOS ကိုရော နှစ်ရှည်လများ အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကြာလာတော့ Android ပေါ်မှာ Customize လုပ်ရတာ ကျွန်တော့်အတွက် အတော့်ကို ပျင်းရိလာတယ်လို့ ခံစားလာရတယ်။
iOS ကို jailbreak လုပ်ပြီး Themes တွေပြောင်းတယ် မျိုးစုံအလှဆင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အများဆုံးတစ်ပတ်ပဲ ခံတယ် ပြီးတာနဲ့ iOS ရဲ့ Default UI ကိုပဲ ပြန်ပြန် ပြောင်းဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော့်အတွက် iOS ရဲ့ default UI ဟာ မျက်လုံးထဲမှာ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အလှဆုံးလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခံစားလာရတယ်။ Home screen က Apps တွေကို သူ့ Original အတိုင်းထားထားတာဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အလှဆုံးနဲ့ မရိုးနိုင်ဆုံး မြင်ကွင်းပါပဲ။
သင်တို့ရော iOS ရဲ့ User interface ကို ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ?
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော Operating system တွေအားလုံးထဲမှာ iOS ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ အဆန်းပြားဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် OS မှာမှ မရတဲ့ OS တစ်ခုရဲ့ ချောမွေ့မှူကို ခံစားရတယ်။ Crash ဖြစ်တာလဲ အနည်းဆုံး OS တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်အတွက် iOS ဟာ Easy to use ပါပဲ အသုံးပြုရအရမ်းလွယ်ကူတယ်။ Android ဖုန်းတွေမှာလို UI တွေ ကွာခြားမှူမရှိတာကြောင့် iOS ကို တစ်ခါအသုံးပြုဖူးထားတယ်ဆိုရင် ဘယ်လို iDevices ကိုမဆို လွယ်လွယ်ကူကူ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Clean and Minimalist ဆိုတာကို ခုံမင်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ iOS နဲ့ အကိုက်ညီဆုံးပါပဲ။ iOS ရဲ့ အားသာချက်တွေကို ပြောနေရင် ရှည်မှာစိုးတာကြောင့် iOS versus Android ဆိုတဲ့ Post လေးမှာ iOS ရဲ့ အနိုင်ရတဲ့ အားသာချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
iPhone တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ Hardware တွေဟာ Apple ကိုယ်တိုင် Design ဆွဲပြီး သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ့ အခြား company တွေကို ထုတ်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ iOS နဲ့ iPhone တွေ တစ်သွေးတည်း ၊ တစ်သားတည်းကျနေတာဟာ Apple ရဲ့ အကောင်းဆုံးသော Hardware တွေကြောင့်ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့ အမှန်တရားပါ။ A series CPU တွေကို Apple ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာနဲ့ TSMC, Samsung စတဲ့ company တွေက ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီး အခြား Brand တွေလို CPU တွေကို Qualcomm တို့ Mediatek တို့ဆီက ဝယ်ယူရတာမဟုတ်ပါဘူး။
သင့်အနေနဲ့ Apple ဟာ အခြား company တွေဆီက အရေးကြီးတဲ့ Hardware တွေကို ဒီတိုင်း ဝယ်ယူနေရတယ်ထင်ရင် မှားသွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုဝယ်လို့ရတိုင်းသာဆိုရင် Apple ရဲ့ A series chips တွေ ၊ True tone display လို နည်းပညာတွေ ၊ 3D touch လို နည်းပညာတွေကို အဲ့ hardware ထုတ်ပေးတဲ့ ကုမ္မဏီတွေက သုံးနေမှာပေါ့။ ဒီ Company တွေက Apple ရဲ့ Design အတိုင်း ၊ နည်းပညာအတိုင်းပဲ လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့လဲ ဒီနည်းပညာတွေကို ကူးချလို့မရအောင် Apple က မူပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
Apple အနေနဲ့လဲ ဖုန်းတစ်လုံးရဲ့ parts တွေအကုန်ကို ထုတ်လုပ်ဖို့ စက်ရုံမရှိတာကြောင့် အခုလို ဝယ်ယူအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေသိ အခုချိန်မှာတော့ Apple ဟာ Qualcomm နဲ့ ပြသနာတက်ထားပြီး 5G modem တွေကို မထုတ်လုပ်နိုင်သေးလို့ 2019 iPhone တွေမှာ 5G မရပါဘူး။ xD
ဒါပေမဲ့ 5G modem တွေကို အခု Apple က ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနဲ့ စတင်ထုတ်လုပ်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
iPhone နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ Accessories တွေဟာ Android flagship တွေထက်ပိုမိုများပြားပါတယ်။ Screen guard, cover ကအစ Premium accessories တွေအဆုံး အစုံအလင်ရှိပါတယ်။
Camera Lens Kits တွေ ၊ Keyboard တွေ ၊ Bluetooth နဲ့ တွဲဖက်ကစားရတဲ့ Sphere Mini Robot လို ကစားစရာလေးတွေ ၊ iOS health app နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေ စသည်ဖြင့် စုံလင်လှပါတယ်။ Accessories makers တွေအနေနဲ့လဲ တစ်နှစ်မှ တစ်ခုပဲ ထွက်တဲ့ iPhone တွေအတွက် ပြုလုပ်ရတာ ပိုမိုလွယ်ကူပြီး များပြားလှတဲ့ android flagship တွေအတွက်ကျတော့ ထုတ်လုပ်ရမဲ့ range က ကျယ်ဝန်းလှတာကြောင့် iPhone တွေအတွက် တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ Accessories တွေဟာ ပေါများလှပါတယ်။
Apple ရဲ့ Ecosystmy အကြောင်းကို အောက်က Chart လေးကိုကြည့်လိုက်ရင် နားလည်လောက်မယ်ထင်ပါတယ်။
More Apple Services – Apple Arcade, Apple pay, Apple TV, Apple News+, Apple card, etc
Hardware, Software, Application Software and Services ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးခု အောက်မှာ Apple Ecosystem ဟာ သိပ်ကို ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခြား Ecosystem တွေထက် ပိုပြီး Secure and Reliable ဖြစ်တယ်ဆိုတာလဲ ငြင်းမရတဲ့ အမှန်တရားပါ။
iPhone တစ်လုံးရဲ့ Warranty ဟာဘယ်လောက်ထိ Reliable ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ သင် သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ warranty အကြောင်းအသေးစိတ်သိချင်ရင် ကို Pyae Hein Kyaw ရဲ့ PHK Knowledge sharing website မှာ သွားရောက်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်။ Here is the link
Best Support ဆိုတဲ့ နေရာမှာ Apple Support နဲ့ live chat ဖူးတဲ့သူဆိုရင် Apple ရဲ့ Support ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ Apple support team မှာ သင့်ရဲ့ Apple Products တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကူညီပေးမဲ့ 24/7 live chat ပြုလုပ်ပေးမဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အမြဲအဆင်သင့်ရှိပါတယ်။
Apple ရဲ့ After Sale Service ဟာလဲ အတော့်ကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Customer ကို ဝယ်ယူပြီးတဲ့နောက် ဖြစ်ချစ်တာဖြစ်ဆိုပြီး ပစ်ထားတဲ့အထဲမှာ Apple မပါပါဘူး။
Customer ကို ပစ်ထားတာမျိုး Apple မလုပ် ၊ လုပ်ရင် Apple မဟုတ် xD
Hardware ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ Return Policy တွေ ၊ Repair Program (ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးတာ)တွေ ၊ Replacement Program ( အသစ်လဲလှယ်ပေးတာ ) တွေ စတာမျိုးတွေကို အမြဲလိုလိုပြုလုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – Battery ကျနေတဲ့ iPhone တွေကို $ အနည်းငယ်နဲ့ အသစ်လဲပေးတာ ၊ Macbook တွေရဲ့ Keyboards တွေ လဲပေးတာ ၊ ဟိုတလောကပဲ ထွက်ရှိပြီးတာ နှစ်ချီနေတဲ့ iPhone 6s လိုဖုန်းမျိုးကိုတောင် အဖက်လုပ်ပြီး Repair Program ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်။ iPhone 6s Repair Program Link
Software ပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ Security Flaw, software bugs, errors ဘယ်လိုမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် နေ့ချင်းညချင်း update အသစ်ထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒီလို Software Support မျိုးကို android တွေမှာ Pixel, One Plus နဲ့ Android One တွေလောက်ကလွဲလို့ ဘယ် brand မှ မလုပ်ပေးပါဘူး။ Software update နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ထွက်ရှိပြီးတာ ၄ နှစ်ကြာနေတဲ့ iPhone 6s တောင် 2019 ရဲ့ iOS 13 ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အခြား Android တွေမှာ Software Update ဆိုတာကို ရဖို့ iOS လောက်မလွယ်ကူတာတော့ အမှန်ပါ။
Support တွေ ၊ aftersale Service တွေအကြောင်း ပြောပြီးပြီဆိုတော့ Long term usage အကြောင်းပြောရအောင်
ဘယ်သူမှ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Phone တစ်လုံးကို ၄/၅ နှစ်မသုံးပါဘူး။ သုံးချင်ရင်လဲ iPhone တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။ 2015 က iPhone 6s လေးဟာ ဒီနေ့ 2019 မှာ iOS 13 နဲ့ သာသာယာယာ အသုံးပြုလို့ရနေပါသေးတယ်။ 2015 တုန်းက ကျွန်တော့်ရဲ့ Android flagship လေးတစ်လုံးကတော့ Android 7.0 နဲ့ အတိတ်မှာ ကျန်ရစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘော်ဒါတစ်ယောက်ဟာ 2014 က iPhone6ကို အခု 2019 ရောက်မှ iPhone အသစ်တစ်လုံးနဲ့ လဲပါတယ်။ Android flagship တစ်လုံးဝယ်ဖို့ ဘယ်လိုမှ တိုက်တွန်းမရပဲ iPhone ပဲဝယ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ဒီကောင်က ဖုန်းတစ်လုံးကို ၅ နှစ်စီမံကိန်းနဲ့ ကိုင်တဲ့ကောင်မလို့ပါ။ ဆိုတော့ ကြာကြာသုံးမဲ့ သူတွေအတွက် iPhone တွေက Software support & aftersale service ကောင်းကောင်းနဲ့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
ဒီအချက်ဟာ လူတော်တော်များများ iPhone တွေကို ဝယ်ယူတဲ့အချက်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ :3
Apple အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ Brand Image ကိုဘယ်လောက်ယုံကြည်လဲဆိုရင် $999 တန် Mac stand ထုတ်ရောင်းတာသာ ကြည့်တော့ xD
တကယ်ပါ သာမန်လူတစ်ယောက်ကို Android Flagship ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ Latest iPhone တစ်လုံး နှစ်ခုယှဉ်ချပေးရင် ၁၀၀ မှာ ၉၀ က iPhone ကို ရွေးမှာ အသေအချာပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ iPhone နဲ့ မှန်ရှေ့မှာ Mirror Selfie ရိုက်ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင် Apple ရဲ့ Brand Image ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ သိပါလိမ့်မယ်။ xD
Tech နဲ့ မရင်းနှီးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင် iPhone တွေဟာ အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ Concept လေးတွေတောင် ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တစ်လုံးကို ကိုင်ထားရတဲ့ Premium ဖြစ်မှူဆိုတာကိုလဲ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone မကိုင်ဖူးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ နည်းနည်း လက်မခံချင်စရာတော့ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ ပွဲတစ်ခု အခမ်းအနားတစ်ခု တက်တာမျိုးမှာ နောက်ဆုံးပေါ် iPhone တစ်လုံးကိုင်သွားရင် Apple ရဲ့ Brand Image ကို သင်သိလာပါလိမ့်မယ်။ လူတွေဟာ iPhone တစ်လုံးကို သာမန် Smartphone တစ်လုံးထက် Luxury Brand တစ်ခုလိုမျိုး ပိုပြီးတောင် အသုံးချတတ်ကြပါသေးတယ်။
iPhone Series တွေဟာ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါသာထွက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဟိုးအရင်တည်းက Apple ဟာ Consistency ကောင်းကောင်းနဲ့ iPhone series တွေကို ထုတ်လုပ်လာခဲ့တာ 11 နှစ် iPhone 11 အထိတိုင်ခဲ့ပါပြီ။ တစ်နှစ်ကို series 10 မျိုးလောက်အထိ ထုတ်နေတဲ့ Brand တွေနဲ့ စာရင် Apple ရဲ့ ဒီလို Consistency ကောင်းမှူတွေကြောင့်လဲ Brand Image ဟာ ဒီလောက်ထိ ကြီးကျယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအချက်ကလဲ iPhone တွေဟာ Apple ရဲ့ Masterpiece လက်ရာတွေဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေဟာ iPhone အသစ်တွေကို ဈေးကြီးပေးပြီး ဝယ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုရေးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးလေးဟာ Apple fan တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပြီး အခြား Android Phone တွေကို အမြင်မကြည်လင်ခြင်း အလျဉ်းမရှိကြောင်း ထပ်မံပြောပါရစေ။
Admin ကိုယ်တိုင်လဲ iOS နဲ့ android နှစ်ခုလုံး အသုံးပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ပတ်မှာ android ဖုန်းတစ်လုံးကို iPhone တစ်လုံးအစား ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို users တစ်ယောက်ရဲ့ Point of view ကနေ ရေးသားဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
I'm justamariner andanerdy tech guy who gotadeep passion of tech. I've beenatech writer for almost six years and I founded this website. My only mission is to provide all about tech in all aspects of technology fields.
အငျတာနကျပျေါမှာ တဈဦးနဲ့ တဈဦး လုံလုံခွုံခွုံ ဘယျလိုဆကျသှယျကွမလဲ?
Post Views: 1,286 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အငျတာနကျပျေါမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈ‌ယောကျ လုံလုံခွုံခွုံ ဆကျသှယျဖို့၊ ကိုယျပွောလိုကျတာတှကေို အခွား ဘယျသူကမှ ကွားထဲကနေ မရယူနိုငျဖို့ လိုအပျတဲ့
Post Views: 484 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Intel က သူတို့ရဲ့ 12th Gen Desktop CPU အသဈတှကေို မနကေ့ မိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ Aldar
Post Views: 1,180 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Mobile Nvidia Graphic Chips ကြှနျတျောတို့ Episode 6: Part 1 မှာတုနျးက Graphic
Why do we buy expensive iPhone? (33,919)
iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade (26,643)
An App that can access MIUI Hidden setting (20,787)
AMOLED Display နှငျ့ LCD Display တို့၏ အားသာခကျြ၊ အားနညျးခကျြမြား (17,917)
What is HTC Doing Now? (17,803)
iPhone တဈလုံးကို ပွုလုပျဖို့ ဘယျလောကျကုနျကသြလဲ? (16,936)